Stylish Varume Yakabuda mu2008 sechirongwa chakatsvaga kubatanidza zvese zvine chekuita nemurume mukona imwechete. Nenzira iyi, chinangwa chedu ndechekuti vashandisi vewebhusaiti ino vakwanise kugara vakagwinya, kupfeka zvakafanira uye kuchengetedza hutsanana uye kuchengetwa kwega. Muchidimbu, vashandisi veInternet vane Varume vane Dhizaini yavo axis yekureva paInternet.
Nomuzvarirwo, izvi zvinongogoneka nekuda kweboka revanyori kuseri kweHcE, iyo iwe yaunogona kuwana pazasi. Kana iwe uchifunga kuti iwe unogona kubatsira kune yedu saiti uye uchida kujoina timu ino yevagadziri, unogona kutirovera runhare pano. Iwe unogona zvakare kushanyira chikamu chedu zvikamu, kwaunogona kuverenga zvinyorwa zvese zvatakaburitsa mumakore apfuura.
Iko kukudzwa kugona kupa yakanakisa kuraira pamusoro pechitaera, kuchengetedza uye mararamiro kune varume. Ini ndine shungu nezve zvese zvine chekuita nenyika yake uye nekugona kuona kusaperera kwezvizoro uye zvimwe zvirimo mune rake fashoni maitiro. Tsvaga zvese zvaunogona kuwana nemamwe matipi uye manomano andinofunga pano.
Ini ndinoda kurarama hupenyu hune hutano, kuita kurovedza muviri uye kudya chikafu chine hutano. Nezve izvo, ini ndinoramba ndichiudzwa nezve hutano nyaya kubvunza akasiyana midhiya. Zvakare, ndine shungu yekugovana zvese zvandinodzidza kubva kune kwandinowana.
Ndinonamata nyika yekurarama zvine hutano, kunyanya misoro ine chekuita nekusimba uye chikafu. Kugara uchiteera musimboti we 'Mens sana mu corpore sana'. Uye nemaonero esainzi. Pamusoro pezvo, ini ndinodzidziswa mune zvehutano nedziviriro dzenjodzi, pamwe nekuchengetedza nharaunda mumakambani Chinhu chakakosha, nekuti haugone kuwana hutano pasina nharaunda ine hutano.
Ini ndiri wangu wega mudzidzisi uye zvemitambo chikafu. Ndanga ndichizvipira kune nyika yehutano uye chikafu kwemakore uye ndinofarira nezve zvese nezvazvo. Mune ino blog ndinonzwa kuti ndinogona kupa ruzivo rwangu rwese nezve kuvaka muviri, maitiro ekuva nechikafu chakaringana kwete chete kuti ndiwane muviri wakanaka, asi kuti uwane hutano.
Ini ndinofarira zvefashoni yevarume. Kana iwe uchida kuramba uchiziva nezvose zvinoitika nezve fashoni uye runako rwevarume saka ini ndinokurudzira kuti iwe uverenge zvinyorwa zvangu.
Akazvarwa muMalaga muna 1965, Fausto Antonio Ramírez anogara achipa kune akasiyana madhijitari midhiya. Munyori werondedzero, ane zvakati wandei zvinyorwa pamusika. Parizvino arikushanda panoverengeka nyowani. Anoshushikana nezve nyika yemafashoni, hutano hwepanyama, uye murume aesthetics, akashanda kune akasiyana midhiya nyanzvi munyaya iyi.
Carlos Rivera anochengeta mufananidzo
Stylist, mutengesi mutengesi uye fashoni & mararamiro edhitaina. Parizvino ini ndinoshanda pamwe nemakambani akasiyana siyana uye midhiya seyangu inoshanda. Unogona kunditevera pane yangu bhurogu uye, chokwadika, undiverengere mune 'Varume vane Style'.